Aqoonsiga iyo xuduuda Denmark | Somaliska
Booliska Denmark ayaa bilaabay in ay aqoonsi ka dalbadaan dadka ku safraya buundada Öresund ee iksu xirta magaalada Malmö iyo Kobenhegan. Arintaan ayaa qeylo dhaan siyaasadeed ka dhaliysay Denmark maadaama uu jiro heshiis ka dhexeeya Sweden iyo Denmark kaas oo dhigaya in aan aqoonsi looga baahneyn dadka u dhashay wadamadaas ee u kala gooshaya xuduuda. Arinta cajiibka ah ayaa ah in Booliska Denmark ay si gaar ah aqoonsiga uga dalbanayaan dadka u muuqda in ay yihiin ajanabi taasoo keentay in labo qof oo dhalashada Sweden haysata la qabtay oo loogu hanjabay ganaax. Martin Lasson Berglund oo ah nin ay soo korsadeen reer Swedish ah haystana dhalasha Sweden ayaa ka mid ah dadka la waydiiyay aqoonsiga asagoo u sheegay wargeyska SydSvenskan "Markii hore waxaan dareemay bahdil, waayo way iska cadeyd in midabka jirkeyga dartiis ay ii waydiiyeen aqoonsiga balse kalsooni ayaan dareemay maadaama aan la socday heshiiska ka dhexeeya Sweden iyo Denmark". Arintaan ayaa dhibaato ku noqon karta Soomaalida ka soo gasha Sweden Denmark maadaama markii hore aysan jirin shuruud nuucaan ah. Denmark ayaa lagu eedeeyaa in ay tahay wadan sharciyeeyay cunsuriyada iyo kala qeybinta ummada, iyagoo Denmarka xitaa ay adkeysay guurka u dhexeeya dadka Danishka ah iyo soo galootiga.
Booliska Denmark ayaa bilaabay in ay aqoonsi ka dalbadaan dadka ku safraya buundada Öresund ee iksu xirta magaalada Malmö iyo Kobenhegan. Arintaan ayaa qeylo dhaan siyaasadeed ka dhaliysay Denmark maadaama uu jiro heshiis ka dhexeeya Sweden iyo Denmark kaas oo dhigaya in aan aqoonsi looga baahneyn dadka u dhashay wadamadaas ee u kala gooshaya xuduuda.
Arinta cajiibka ah ayaa ah in Booliska Denmark ay si gaar ah aqoonsiga uga dalbanayaan dadka u muuqda in ay yihiin ajanabi taasoo keentay in labo qof oo dhalashada Sweden haysata la qabtay oo loogu hanjabay ganaax.
Martin Lasson Berglund oo ah nin ay soo korsadeen reer Swedish ah haystana dhalasha Sweden ayaa ka mid ah dadka la waydiiyay aqoonsiga asagoo u sheegay wargeyska SydSvenskan “Markii hore waxaan dareemay bahdil, waayo way iska cadeyd in midabka jirkeyga dartiis ay ii waydiiyeen aqoonsiga balse kalsooni ayaan dareemay maadaama aan la socday heshiiska ka dhexeeya Sweden iyo Denmark”.
Arintaan ayaa dhibaato ku noqon karta Soomaalida ka soo gasha Sweden Denmark maadaama markii hore aysan jirin shuruud nuucaan ah.
Denmark ayaa lagu eedeeyaa in ay tahay wadan sharciyeeyay cunsuriyada iyo kala qeybinta ummada, iyagoo Denmarka xitaa ay adkeysay guurka u dhexeeya dadka Danishka ah iyo soo galootiga.